Steve Jobs, Bill Gates, GUI နဲ့ ကျွန်မ တို့အတွက် သမိုင်းကြောင်း များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » Steve Jobs, Bill Gates, GUI နဲ့ ကျွန်မ တို့အတွက် သမိုင်းကြောင်း များ
Steve Jobs, Bill Gates, GUI နဲ့ ကျွန်မ တို့အတွက် သမိုင်းကြောင်း များ
Posted by မြစပဲရိုး on Dec 23, 2011 in Society & Lifestyle | 12 comments
ကျွန်မ ကွန်ပြူတာ အရမ်း ကျွမ်းကျင်သူ မဟုတ်ပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်ထဲ မှာ BBC ကလွှင့်တဲ့ “Steve Jobs – Billion Dollar Hippy” လို့ အမည်ရှိ Documentary ကနေ ရလိုက်တဲ့ အတွေး တစ်ခုကို Share လုပ်ချင်ပါတယ်။
ကျွန်မ အခုပြောမှာကို သိပြီး သူများလဲ ရှိမှာပါ။ ကျွန်မ ကတော့ အဲဒီ Documentary ကမှ သိလိုက်တဲ့ အကြောင်း ဖြစ်လို့ ကျွန်မ ခင်တဲ့ ရွာသူ/သား များ ကို လက်ဆင့်ကမ်း လိုက် ပါတယ်။ ကျွန်မ ပြောတာတွေ Technical Term အရလဲ မှားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို တွေ့လို့ အမှား ထောက်ပြ ခဲ့ရင်ဖြစ်စေ၊ လိုတာ ဖြည့်စွက် ပေးရင် ဖြစ်စေ အားလုံးအတွက် ပိုပြီး ဗဟုသုတ ရမယ် ထင်လို့ စမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။ သိပြီးသား ဖြစ်နေကြရင်လဲ ကျွန်မ ရဲ့ နောက်ကျမှ သိရှိခဲ့ခြင်း အကြောင်းကို မျှဝေခြင်းလို့ သဘောထားကြပါ။
ကျွန်မ စတွေ့ဘူး ခဲ့တဲ့ ကွန်ပြူတာက PC (Personal Computer) ပါ။ အဲဒီအချိန် PC Set ဆိုတာထဲမှာ mouse မရှိသေးပါဘူး။ System Unit, Monitor နဲ့ Keyboard ကဘဲ Commands တွေပေး သုံး ခဲ့ရ ပါ တယ်။ Operating System က MS-DOS Version (Microsoft Disk Operating System) ပါ။ အဲဒီတုန်းက စက်ထဲမှာ Hard drive မရှိပါဘူး။ စက်ကို စဖွင့် ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ Application တစ်ခုခု (ဥပမာ – စာရိုက်ဖို့) သုံးချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ Data ကို (ဥပမာ – စာရိုက်ပြီး Document) သိမ်းဖို့ ဖြစ်ဖြစ် သက်ဆိုင်ရာ “five quarter inch” Floppy Disk များ ကို သုံးရပါတယ်။ နောက်ပိုင်း “three and half inch” ဆိုပြီး တိုးတက်လာပါတယ်။ ဒီလို ပြောရင် အခုခေတ် လူငယ်တွေ အတွက် ရီစရာ ဖြစ်ပါမယ်။ ကျွန်မတို့ တုန်းကလဲ အရင်လူကြီးတွေ သုံးခဲ့တဲ့ Mainframe စက်ဟောင်းကြီးတွေ အကြောင်းကို ကြားတော့ ရီခဲ့ဘူးတာဘဲ။
နောက်ပိုင်း မှာမှ GUI (Graphical User Interface) ကို Support လုပ်တဲ့ Microsoft Windows Operating System ပါ စက်များ မှာ Mouse ကို တွဲ သုံးလာပါတယ်။
Cursor ရွှေ့ချင်ရင် Keyboard Arrows ကို သုံး၊ Command ပေးချင်ရင် Text Command Line နဲ့ ရိုက် နေခဲ့ ရ တဲ့ DOS Version ဘဝ ကနေ Screenပေါ်မှာ Menu Icon တွေကို mouse နဲ့ ရွှေ့သုံး ရ တဲ့ Windows Version ဘဝဟာ အတော်လေး သက်တောင့် သက်သာ ရှိသွားခဲ့ တာ ကြုံဘူးခဲ့သူတိုင်း သိမှာပါ။ ဒီမှာတင် အဲဒီ GUI နဲ့ Mouse ဟာ PC ကွန်ပြူတာ သုံးသူ တွေရဲ့ Life Saver ဖြစ်ခဲ့ သလား ပါဘဲ။
အဲဒီ အချိန် Steve Jobs ရဲ့ Apple မှာ GUI ရှိပြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ Apple Product ဟာ အဲဒီချိန် ထဲမှာကို အရမ်း ဈေးကြီးပါတယ် တဲ့။ ဒီတော့ ကျွန်မ သိခဲ့တဲ့ Knowledge ကတော့ Windows က Apple ရဲ့ Idea နဲ့ Technology ကို ခိုးချ တယ် ဆိုတာပါဘဲ။
အဲဒီ Documentary အရ ဆိုရင်တော့ Apple ကလဲ GUI ကို စတာ မဟုတ် ခဲ့ပါဘူး။
GUI အစဟာ Xerox Corporation (Company) ရဲ့ ၁၉၇၃ မှာ ထွင်တဲ့ Alto Computer Project မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Project ဟာ ၁၉၈၁ မှာ ရောင်းခဲ့တဲ့ ‘Xerox Star 8010 Document Processor’ လို့ခေါ်တဲ့ Computer အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဈေးကြီး လွန်းလို့ ဈေးကွက် ထဲမှာ အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပါဘူး။
၁၉၇၉မှာ Xerox က Apple Inc. ရဲ့ ရှယ်ယာ တွေဝယ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာ သူ ဟာ Xerox ရဲ့ Palo Alto Research Centre (PARC) ကို သွားရင်း သူတို့ ရဲ့ GUI Design ကို တွေ့လာပြီး သူ့ရဲ့ Apple Lisa (သူ့သမီး အမည်လို့ ဆိုပါတယ်) Product ကို GUI ပုံစံ လှပ တင့်တယ်စွာနဲ့ ထွက် လာ အောင် စကြိုးစား ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၃ မှာ စရောင်းခဲ့ပါတယ်။
(အောက်မှာ မှီငြမ်း Link (၅) – GUI Time Line ကို လေ့လာ နိုင်ပါတယ်)
အဲဒီချိန်မှာ Microsoft က Apple ရဲ့ Application Software တွေကို ရေးပေးနေတာပါဘဲ။
အဲဒီနောက်ပိုင်း မှာတော့ Microsoft ရဲ့ GUI နဲ့ထွက်လာတဲ့ Windows1.0 ဟာ Apple Lisa ကို ကူးချပါတယ် ဆိုပြီး Steve Jobs က စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ လူအများကြား မှာကို အပြန်အလှန် စကားများခဲ့ပါတယ်။
“မင်း ငါ တို့ ဆီက ခိုးတယ်” လို့ Steve Jobs က ကို အော်တော့
Bill Gates က “တစ်ခြားနည်း နဲ့ ကြည့်ရင် ငါတို့ နှစ်ယောက်စလုံး မှာ အိမ်နီးချင်း သူဌေး Xerox ရှိတယ်။ ငါ သူ့ ဆီက TV Set ကို ခိုးဖို့ သူ့အိမ်ကို ဖောက် တော့ မင်းက အဲဒါကို ခိုးပြီး နေပြီ” လို့ အေးအေး ဘဲ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။
(ကျွန်မ အတိုချုပ် ဘာသာပြန်တာ မှားရင် ဆရာမကြီးTTNu ခွင့်လွှတ်ပါရှင့်)
သူတို့ပြောတဲ့ စကားတွေကို မူရင်း အတိုင်း လဲ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း သူတို့နှစ်ယောက် ကြားမှာ GUI Product တွေ Release လုပ်ချိန် ကို Agree လုပ်ခဲ့တယ် ပြောပါတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်မတို့ အားလုံး လဲ ကိုယ့်သမိုင်းကြောင်း ကို အမြဲတိုးတက်အောင် ပြင်ဆင် နေ နိုင်ခဲ့ရင် အရင် က မကောင်း ခဲ့တဲ့ သမိုင်း တွေကိုတောင် ပြန်ပြင်ရေးနိုင်မယ် လို့ ထင်မိ ပါ ကြောင်း ပြောရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါ၏။ :-)
ဒီ Post အတွက် မှီငြမ်း ချက် များကို အသေးစိတ် ပိုသိလိုပါက –
(၁) “Steve Jobs – Billion Dollar Hippy” လို့ အမည်ရှိ Documentary
(၂) Floppy Disk အကြောင်း
(၃) GUI Short History
(၄) Rich neighbour named Xerox
(၅) GUI Time Line
“တစ်ခြားနည်း နဲ့ ကြည့်ရင် ငါတို့ နှစ်ယောက်စလုံး မှာ အိမ်နီးချင်း သူဌေး Xerox ရှိတယ်။ ငါ သူ့ ဆီက TV Set ကို ခိုးဖို့ သူ့အိမ်ကို ဖောက် တော့ မင်းက အဲဒါကို ခိုးပြီး နေပြီ”
ဘီလ်ဂိတ်က အဲလိုကြီးတကယ်ကို ပြောထားတယ်လို့.. အခုမှသိတယ်..။
ကိုယ်ပိုင်အတွေးလေးနဲ့ မူရင်းကို လှပအောင်ချယ်မှုန်းမှုက တော်တော်ကောင်းပါတယ်။
၁.သမိုင်းဆိုတာ မကောင်းရင် သင်ခန်းစာယူရမယ်။ အဲဒီအမှားမျိုး နောက်မဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။
၂.ဗီလိန်ဆိုတာမရှိဘူး။ သမိုင်းရဲ့ ပေတံနဲ့ ကြည့်ရင် လူကောင်းလဲဖြစ်နိုင်တာဘဲ။
၃.ပီးတော့ သမိုင်းက ကောင်းရင်ကောင်းသထက် ကောင်းအောင်လုပ်သင့်တယ်လို့
မခင်လတ်ကဆိုလိုချင်တာကို ကျနော် တွေ့လိုက်ရလို့ပါဘဲ။ ကျေးဇူးပါနော်။
အလွန်ကောင်းမွန်သော …documentory video လေးအတွက်
ပို့စ်ပါ အကြောင်းအရာများ အပါအ၀င်..အနှစ်ချုပ်အတွက်လည်း
ထပ် မံ၍ကျေးကျေးပါ …
ဆက်ရေးပါဦးလို့လဲလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပန်ကြားအပ်ပါသည်ခင်ဗျား ….
>>>၁၉၇၉မှာ Steve Jobs ဟာ Xerox က Stock ရှယ်ယာ တွေဝယ်ခဲ့ပါတယ်။
Xerox ကသာ Apple Inc. ရဲ့ ရှယ်ယာတွေကို ၀ယ်ယူခဲ့တာပါ….
ကျနော်အမှတ်မမှားရင် Xerox ရဲ့ Palo Alto ကိုလေ့လာဖို့အတွက်..
Apple Inc. ရှယ်ယာ ၈ပုံ၁ပုံပေးခဲ့ရတာပါ ဗျ…
အမ ညွှန်းတဲ့ BBC doc: ရဲ့ မိနစ်၂၀ မှာလည်း အဲ့လိုဘဲပြောထားပါသည်ခင်ဗျား…..
ကိုယ့်ထက်လည်း ငယ်မယ်ထင်လို့ တီချာကြီးပေးထားတဲ့ နာမည်ကိုလည်း နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ မလတ်လို့ပဲ ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
Rival တွေရဲ့ Relationship က စိတ်ဝင်စားစရာမို့ စောင့်မျှော်နေပါမယ်။
ကျနော်လဲ..အန်တီ့လိုပဲ..တူတို့ နှစ်ယောက်ကို ဗွီလိန်လို့ .မမြင်ဝံ့ပါခင်ညား..
ကျေးဇူးရှင်တွေ အဖြစ်သာ မြင်ပါ၏….
မလတ်ရဲ့ နောက်တင်မယ့် Relationship အကြောင်းလေးတွေကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်မျှော်ဖတ်ရူ့နေပါမည်……
မလတ်ရေ…………… မလတ်ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ အရေးအသားတွေကို သဘောကျလို့ အမြဲတမ်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တင်မယ့် အကြောင်းလေးတွေကိုလည်း စောင့်စားရင်းနဲ့……………….
“……ကိုယ့်သမိုင်းကြောင်း ကို အမြဲတိုးတက်အောင် ပြင်ဆင် နေ နိုင်ခဲ့ရင် အရင် က မကောင်း ခဲ့တဲ့ သမိုင်း တွေကိုတောင် ပြန်ပြင်ရေးနိုင်မယ် လို့ ထင်မိ ပါ ကြောင်း ……”
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mr. President ကြီးကိုများ စောင်းပြောနေတာလားဟင်…..???
တကယ်တန်းတော့..သူတို့ဟာကျနော်တို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေပါပဲ.. ကျနော်တို့တွေ ယခုလို ရေးနိုင်အောင်၊သိနိုင်အောင် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲ..
မခင်လတ်ရေ..နောက်ကြုံရင် ရေးမယ့် သူတို့နှစ်ဦးအကြောင်းလေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
သူကြီး ကိုခိုင် – ကျွန်မ လဲ Bill Gates ရဲ့ အဲဒီ စကားကို သဘောကျလို့မဆုံးဘူး။
အားပေးမှု အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ဆက်ကြိုးစားပါ့မယ်။
ဦးသစ်မင်း – ဦးသစ်မင်း ရဲ့ ကောက်နှုတ်ချက် က ကျွန်မ ပြောချင်တဲ့ စကားတွေ ကွက်တိပါဘဲ။ ဦးသစ်မင်း ဆီ က တဖြေးဖြေးနဲ့ ရလာတဲ့ ပညာတွေ အတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
ဂိဂိ ရေ – anata wa jouzu desu ne!!! domo arigato.
ဒီလောက်ဘဲတတ်လို့ မြန်မာလို ဆက်ပြောပါမည်။ ;-)
“Xerox ကသာ Apple Inc. ရဲ့ ရှယ်ယာတွေကို ၀ယ်ယူခဲ့တာပါ….”
ဂိဂိ မှန်ပြီး ကျွန်မ မှားပါတယ်။ ဒီလို ထောက်ပြတာ ကျေးကျေးပါ။ သေချာ အောင် ဒီမှာ လဲ ရှာထားပါတယ်။ http://applemuseum.bott.org/sections/history.html
ဂိဂိ က ဘုရားဟော အတိုင်းလဲ ကျင့်နိုင်သကိုး။
ကာလာမတို့၊သင်တို့သည် သူတစ်ပါးပြောသော စကားဖြင့်လည်းကောင်း၊ဤသို့ကြားဖူး ၏ ဟူ၍ သော်လည်းကောင်း၊အစဉ်အလာယုံမှတ်ခဲ့သည့်အရာ ဟူ၍ လည်းကောင်း နားမယောင်ကြလင့်။ …… ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ အထပ်ထပ် ချင့်ချိန်ပြီး ကျိုးကြောင်းခိုင်မာမှ ယုံပါလို့ ဟောကြားလိုက်ပါတယ်။
မမ ရေ – ဝင်ဖတ်တာ ကျေးဇူးပါ။ ကြုံတုန်း ပြောရရင် ကျွန်မ အင်ဂျင်နီယာ အရမ်း ဖြစ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်မဖြစ် ခဲ့ပေမဲ့ လဲ အမျိုးသမီး အင်ဂျင်နီယာ တွေအတွက် အမြဲ ဂုဏ်ယူလေ့ ရှိပါတယ်။ မမ နဲ့ ဒီလို သိကျွမ်းရတာ ဝမ်းသာလှပါတယ်။ RIT က ကိုယ့်ကျောင်း မဟုတ်ပေမဲ့ ဆရာမ မစန္ဒာ ရဲ့ ဂျီဟောသူ ကို အလွတ်နီးပါးရတဲ့ အထိ ဖတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ မမ တို့အားပေးမှု နဲ့ ကျွန်မ ကြိုးစားပြီး ဆက်ရေးပါ့မယ်။
တူလေး မောင်ငပေါက်ဖော် – “လွန်စွာ ကျေးဇူးတင် တဲ့” အတွက် အန်တီ ကလဲ “ကျေးဇူး လွန်စွာ” တင်ပါတယ်ကွယ်။
Super နဲ့ tt lay ရေ – ဒီလို ကြင်နာစွာ Support လုပ်ပေး ကြလို့ အရမ်းအားရှိပါတယ်။ ဆက်ရေးပါ့မယ်နော်။
Arkar11 ရေ – ရှေ့ တည့်တည့် မှာ သွားပြော နိုင် ဖို့တောင် ဆုတောင်းချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတစ်ယောက် တည်း ဆန္ဒ နဲ့တော့ အားလုံးပြီးမယ် မထင်ဘူး။
ကို blackchaw – တံခါးစောင့်ကြီး ဆီက စကားကြားရတာ ရွာထဲ တရားဝင် ဝင်ခွင့် Permit ကို ရလိုက်ကို ခံစားရပါတယ်။ (jk ;-)) ကျေးဇူးပါနော်။
ကိုဇော်မင်း ရေ – အားပေးမှု နဲ့ မြန်မြန် ကြုံအောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ချီးကျူးတာ မခံယူဝံ့ပါ အစ်မတော်ခင်ဗျား ..
ရွာထဲကို နောက်ထပ် စူပရာနို အဆိုရှင်တယောက် ရောက်ရှိလာတာကို
၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုကြောင်းပါ …..
သည်အကြောင်းတွေက ဂီ ..Apple Inc အကြောင်း တူးဆွဖူးလို့ အနည်းငယ်
သိဖူးရုံလောက် လွဲရင် မပိုပါဘူးဗျာ…
competition ကြား က relationship တွေ အကြောင်း…ဆက်ရေးပါဦးနော ….